तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरो, हजारौं प्रभावित
You are at Home तराईमा बाढी र पहाडमा पहिरो, हजारौं प्रभावित
वीरगंज, २८ साउन / अविरल बर्षाका कारण जनजिवन प्रभाबित बनेको छ । बर्षासंगै नदीमा आएको बाढीको कारण देशका बिभिन्न ठाँउका बस्ती डुवानमा पर्नुको साथै धनजनको क्षति भएको छ । यसैगरी अबिरल बर्षा संगै नदीमा आएको बाढीले पर्सा जिल्लाका विभिन्न ठाउँ जलमग्न भएका छन् । जिल्लाको सदमुकाम वीरगंजका आर्दशनगर,पानीटंकी, राधेमाई,रानीघाट, घडिअर्वा क्षेत्र जलमग्न भएका छन भने श्रीसिया ,तिलावे र नवरंगिया नदीमा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि पर्साका ग्रामिण भेगका जनजिवन प्रभाबित संगै धानखेतीमा समेत क्षति पुरयाएको छ । यसैगरी पर्साको भेडहा खोलामा आएको पानी बेलवा गाँउपालिका वडा नं. ४ बेलवा टोलका मुसहरबस्ती प्रभाबित भएको छ । बस्तीमा पानी पसेपछि राती १ बजे देखि मुसहर बस्ती बासीन्दाहरु बिद्यालयमा बास बाध्य भएको स्थानिय हरी प्रसाद यादवले जानकारी दिनु्भयो । यता बिन्दवासनी गाँउपालिका वडा नं. ३ झौवागुठीमा २ सय बिगहामा लगाइएको धानखेती नष्ट भएको छ । साथै सो भेगमा रहेका पाँच वटा पोलर्टीफर्ममा पानी पस्दा पाँच हजार भन्दा बढी कुखुरा नष्ट हुने सम्भावन देखिएको छ ।
यसैबिच पर्साका मसियानीमा बाढी बस्तीमा पस्दा स्थानियहरु बिचल्लीमा परेको छन । गंगोल खोलाको पानी बस्तीमा पसेपछि स्थानियहरु शरणलिन नहर, रोडहरुमा बास बस्न बाध्य भएको छ ।
यसैगरी बारा जिल्लाको सदमुकाम कलैयाका साथै जीतपुर, सिमरा, नितनपुर, पथलैया ,टेढाकटी, भलुई भरवलिया निजगढलगायत बिभिन्न स्थानको बस्तीहरु डुवानमा परेका छन । जिल्लामा रहेको बंगरी, भाँग्रा, पसाहा, श्रीसिया र दुधौरा खोलामा आएको बाढी बस्तीमा पसेपछि बाराका अधिकाशं बस्तीहरु डुबानमा परेका हुन् । सिम्रोनगढ नगपालिका ८ कचोर्वा बस्ने ४५ वर्षीया गहनी पासवानको घर भत्किएर मृत्यु भएको छ । राति सुतीरहेको समयमा घर भत्किँदा उनको मृत्यु भएको जिल्ला प्रहरी कार्यलय बाराले जनाएको छ । अविरल वर्षापछिको डुबान र बाढीले मोरङमा धन–जनको क्षति भएको छ । बाढी र डुबानले मोरङमा हालसम्म झन्डै १५ सय घर डुबानमा परेका छन् भने खोलामा आएको बाढीले बगाएर तीनजना बेपत्ता भएका छन् ।लगातारको वर्षाले विराटनगरका ४, ५, ६, ११ र १२ नम्बर वडा पूर्ण रुपमा डुबेका छन् । डुबानबाट अन्दाजी ६ सय घर डुबेको र उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । यसैगरी अविरल वर्षापछि आएको बाढीमा परेर बाँकेमा ४ जनाको ज्यान गएको छ । बाढीले गावर खोला र गढौली नाकाको पुलसमेत बगाएको छ । जिल्ला प्रहरी कार्यालय बाँकेका प्रहरी उपरीक्षक टेकबहादुर तामाङले दिएको जानकारी अनुसार, बाँकेको राप्ती सोनारी–४ लालपुरमा बाढीको पानी पसेर घर भत्किँदा एकै परिवारका ३ बालबालिकाको मृत्यु भएको छ । बाढीले कबिराज थारुको घर भत्कँदा १२ वर्षीया अञ्जु थारु, ९ वर्षीया सरिता थारु र ७ वर्षीया सुस्मिता थारुको ज्यान गएको हो । यता इटहरी उपमहानगरपालिकामा बाढीले बगाएर ६ जनाको मृत्यु भएको छ । राति नै बाढीले बगाएका ६ व्यक्तिको शव शनिबार बिहान फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ । मृत्यु हुनेमा वालवालिकासमेत छन् ।स्थानीय ट्यांग्रा खोला र बुढीखोलाको किनारमा ५ जनाको शव भेटिएको छ भने तरहरामा एकजना वृद्धको शव फेला परेको प्रहरीले जनाएको छ ।
अविरल वर्षापछिको डुबान र बाढीले मोरङमा धन–जनको क्षति भएको छ । बाढी र डुबानले मोरङमा हालसम्म झन्डै १५ सय घर डुबानमा परेका छन् भने खोलामा आएको बाढीले बगाएर तीनजना बेपत्ता भएका छन् । लगातारको वर्षाले विराटनगरका ४, ५, ६, ११ र १२ नम्बर वडा पूर्ण रुपमा डुबेका छन् । डुबानबाट अन्दाजी ६ सय घर डुबेको र उनीहरुलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने काम भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ । उता, रतुवामाई नगरपलिका ७, ८, ९ र ५ को रतुवा खोला र बक्राहा खोलाको बाँध फुटेर बस्तीमा पानी पसेको छ । पानी पसेपछि झन्डै ७ सय घर डुबानमा परेका छन् । डुबानमा परेका परिवारलाई सुरक्षित स्थानतर्फ सार्ने कार्य भइरहेको प्रहरी चौकी इटहराले जनाएको छ।
Categories: कृषि- वातावरण,ब्रेकिंग न्यूज